Sajhasabal.com | Homeगाँउको आयोजनाको २९ लाख रकमसहित जुम्लाका एक युवा फरार
हेलिकोप्टरबाटै कालापानी क्षेत्र निरीक्षण गरेर फर्किए रक्षामन्त्री
पुर्वउपसभामुख शिवमाया कानुन मन्त्रीमा नियुक्त,आजै शपथ
अख्तियारद्वारा घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
दैलेखमा डोजर दुर्घटना, दुई जना घाइते
आफन्तबाटै असुरक्षित बालिका, ३७ वर्षीय बाबुले गरे १४ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार
छोरोलाई कलेजो दिन भारत पुगेका बैतडीका एक बुवाले लेखे प्रधानमन्त्री यस्तो पत्र
४० वर्षीय महिलामाथि सामूहिक बलात्कार
चन्दा र कमिशनको कारण सप्तकोशीमा सञ्चालित जेटबोट बन्द
सुदूरपश्चिम सरकारको खर्च १३ प्रतिशत मात्रै
हेलिकप्टर मार्फत बझाङको साईपालमा खाद्यान्न आपूति
नेपाल टेलिकमले ल्यायो यस्ता सुविधाहरु,कसरी सुचारु गर्ने ?
आज सुनको मूल्य कति छ ?
अब नेपालीले भारती विमानस्थल प्रयोग गरेर विदेश जान नपाउने,दुतावासको यस्तो आग्रह
गाँउको आयोजनाको २९ लाख रकमसहित जुम्लाका एक युवा फरार
Posted on: 08 May, 2017
नन्दराम जैशी/बैशाख २५, जुम्ला । गाँउको आयोजनाको लाखौ रकम सहित जुम्लाका एक युवक फरार भएका छन् ।
जुम्ला तातोपानि गाँउपालिका ७ तथा साविकको ताम्ती गाविस ५ बारागाँउका ३० बर्षिय युवा भिम बहादुर रावत गाँउको आयोजनाको लाखौ रकम सहित फरार भएका हुन् । आरसि आइ डब्लुको सहयोगमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको पातरसाँगुदेखि बारागाँउसम्म ग्रामिण सडक आयोजनाको २९ लाख ३ हजार ५ सय २२ रुपैया सहित उनि फरार भएका छन् ।
गाँउलेले सडक निर्माण आयोजनाको काम सम्पन्न गरेपछि कामदारलाइ ज्याला बिवरण बाफत आइतबार बैंकबाट २९ लाख ३ हजार ५ सय २२ रुपैया भुक्तानि लिएका ३० बर्षिय युवा रावत अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन् ।
आयोजनाको अध्यक्ष समेत रहनु भएका उहाले आइतबार दिउसो बैंकबाट रकम भुक्तानी लिएसँगै दिउसो ४ बजेपछि सम्पर्क बिहिन भएको सडक निर्माण आयोजनाका सचिब नर बहादुर रावतले बताउनुभयो । रकम सहित फरार भएका युवक तथा सडक निर्माण आयोजनाका अध्यक्ष भिम बहादुर रावत, सचिब नर बहादुर रावत र कोषाअध्यक्ष पदमकलि रावतले संयुक्त रुपमा बैंकबाट रकम भुक्तानी लिएका थिए ।
सचिब नर बहादुर रावतका अनुसार भुक्तानी लिएको रकम कोषाअध्यक्ष महिला पदमकलि रावतलाइ हस्तान्त्रण गर्न नमानेपछि एउटै होटलमा तिनै जना सँगै खाजा खाएर भोलि बिहान भेट्ने भन्दै उनिहरु निस्केका थिए । तर रकम लिएर फरार भएका युवक अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ । पारीवारीक स्रोतका अनुसार पनि फरार युवक कसैको सम्पर्कमा छैनन् । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले फरार युवकको खोजि कार्य जारी रहेको बताएको छ ।
गाँउलेहरु आयोजनाको सबै रकम लिएर फरार भएका युवकप्रति आक्रोसित र चिन्तीत भएका छन् । आयोजनाका कामदारहरु फरार युवकको ज्यान सुरक्षित रहेमा ढिलै भएपनि रकम हात लगाउने आशामा छन् ।
लाखौ रकम सहित फरार रहेका युवकले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल स्वीचअफ गरीएको छ । फरार युवक गँहु गोरो बर्णको छन् भने रातो जकेट, कालो प्वाइन्ट, क्यापटोपि र इरीकवाला खैरो जुता लगाएको पारीवारीक स्रोतले बताएको छ ।